Umthetho wabucala - BullyingCanada
/ Umthetho wabucala
Lo mgaqo-nkqubo usebenza kulwazi lomntu oluqokelelwa kulo BullyingCanada's abanikeli kunye nabaxhasi abanokubakho.
Kulo Mgaqo-nkqubo waBucala, imiqathango “BullyingCanada”, “thina” kunye “nezethu” zibhekisa kwiiofisi ze BullyingCanada, Inc.
Sizibophelele ekukhuseleni iinkcukacha zobuqu zabaxhasi kunye nabanokuba ngabaxhasi. Lo Mgaqo-nkqubo waBucala ubonelela ngolwazi malunga nendlela esiqokelela ngayo, ukusebenzisa, ukuxela nokukhusela ulwazi lomntu siqu. Lo Mgaqo-nkqubo waBucala ukwachaza ukuba umntu onikelayo unokuqhagamshelana njani nathi ngemibuzo, kunye nendlela umntu anokucela ngayo ukwenza utshintsho okanye ukucima naluphi na ulwazi lobuqu esinokuba nalo malunga nabo.
BullyingCanada izibophelele ekukhuseleni ubumfihlo beenkcukacha zobuqu zabaxhasi bayo, amavolontiya, amalungu, naye nabani na ongomnye obandakanyeka kumbutho wethu. Siyakuxabisa ukuthenjwa kwabo sisebenzisana nabo, kunye noluntu, kwaye siyaqonda ukuba ukugcina oku kuthenjwa kufuna ukuba sivuleleke kwaye siphendule ngendlela esiluphatha ngayo ulwazi ekwabelwana ngalo nathi.
Ebudeni bemisebenzi yethu eyahlukeneyo, sihlala siqokelela size sisebenzise inkcazelo yobuqu. Nabani na esiqokelela kuye ulwazi olunjalo kufuneka alindele ukuba luya kukhuselwa ngononophelo kwaye naluphi na ukusetyenziswa kolu lwazi kuxhomekeke kwimvume. Iinkqubo zethu zabucala ziyilelwe ukuphumeza oku.
BullyingCanada izibophelele ekukhuseleni iimfihlo zabachaphazelekayo. Okona kubaluleke kakhulu: Ilungelo lakho lobumfihlo kunye nemfihlo liya kukhuselwa.
Urhwebo loluhlu lokuposa phakathi kwemibutho yesisa ehloniphekileyo ebhalisiweyo
Ukunceda ekufumaneni abaxhasi abatsha kunye nokusebenzisa iinkqubo zethu zokunyusa ingxowa-mali ngeendleko ezifanelekileyo, ngamanye amaxesha sirhweba icandelo elincinci loluhlu lwethu lwabanikezeli ngeposi kunye nabanye abathembekileyo nabanengqondo efanayo. Sikwenza oko kuphela emva kokuba abaxhasi befumene ithuba lokwala ukuthatha inxaxheba kolu tshintshiselwano loluhlu. Abaxhasi banokuphuma kweli lungiselelo nangaliphi na ixesha.
Ngokuvuma ukusivumela ukuba sitshintshiselane ngolwazi loqhagamshelwano olunikezelwe ngabaxhasi ngokuzithandela, bayasinceda ukuba sifumane amagama anokubakho abaxhasi abatsha kunye nenkxaso entsha yomsebenzi obalulekileyo, ongenzi nzuzo. Uluhlu lokuposa luthengiswa ngokungaziwa ngoluhlu lweqela lesithathu kwaye lusetyenziselwa ukuthumela izibheno zemeyile ngqo. Aba bathengisi boluhlu kufuneka baqinisekise ukuba imvume efanelekileyo ifunyenwe ngabanini boluhlu ukusebenzisa amagama akuluhlu.
Amanye amancedo aya kufunda kuphela igama kunye nedilesi yabaxhasi bethu ukuba BullyingCanada abaxhasi bayavuma ukwenza umnikelo kumbutho wesisa esatshintshiselana nawo ngoluhlu lokuposa. Ngokufanayo, BullyingCanada awaziswa ngamagama kuluhlu esitshintshiselana ngalo de umntu onikela kwelinye isisa enze isigqibo sokwenza umnikelo BullyingCanada.
Ukufikelela kulwazi malunga nabanikeli ngabanye
Siyakuvuyiswa kukwazisa abaxhasi ngobukho, naluphi na ukusetyenziswa, kunye nokubhengezwa kolwazi lobuqu, kunye nokubonelela ngokufikelela kolo lwazi lomntu, ngokuxhomekeke kwizinto ezibekwe ngumthetho, kwiintsuku ezingama-30 (ezingamashumi amathathu) zokufumana isicelo esibhaliweyo. ukuya:
Ukuchaza ulwazi lomntu
Ulwazi lomntu lulo naluphi na ulwazi olunokusetyenziswa ukwahlula, ukuchonga okanye ukuqhagamshelana nomntu othile. Olu lwazi lunokubandakanya izimvo okanye iinkolelo zomntu, kunye neenyaniso malunga, okanye ezinxulumene nomntu, ukuba zinikezelwe kuye. BullyingCanada ngophando okanye iincoko. Ngaphandle: iinkcukacha zoqhagamshelwano lweshishini kunye nolwazi oluthile olufumaneka esidlangalaleni, olufana namagama, iidilesi, kunye neenombolo zomnxeba njengoko zipapashwe kuluhlu lweenombolo zemfonomfono, azijongwa njengeenkcukacha zobuqu.
Apho umntu asebenzise iinkcukacha zoqhagamshelwano lwekhaya lakhe njengeenkcukacha zoqhagamshelwano naye, sicinga ukuba iinkcukacha zoqhagamshelwano ezinikiweyo ziinkcukacha zoqhagamshelwano lweshishini, kwaye ke azikho phantsi kokhuseleko njengeenkcukacha zobuqu.
Siqokelela njani iinkcukacha zobuqu
BullyingCanada iqokelela iinkcukacha zobuqu ngomntu kuphela xa zinikelwe ngokuzithandela. Ngokuqhelekileyo, siya kufuna imvume yokusetyenziswa okanye ukubhengezwa kolwazi lomntu ngexesha lokuqokelela. Kwiimeko ezithile, sinokunqwenela ukusebenzisa iinkcukacha zobuqu ebeziqokelelwe ngaphambili ngenjongo entsha (oko kukuthi, injongo engazange ichazwe ngelo xesha kwakuqokelelwa ulwazi). Kule meko, siya kwazisa umntu nge-imeyile okanye ngeposi kwaye simnike ithuba lokuphuma kusetyenziso olutsha olunjalo.
BullyingCanada iqokelela iinkcukacha zobuqu xa umnikelo okanye isibambiso senziwe, nini BullyingCanada imathiriyeli iyacelwa, okanye isebenzisa ezinye zeenkonzo zethu zewebhu.
Asiyi, njengemeko yonxibelelwano kunye BullyingCanada, kufuna imvume yokuqokelela, ukusetyenziswa, okanye ukubhengezwa kolwazi olungaphaya koko lufunekayo ukuzalisekisa iinjongo ezicaciswe ngokucacileyo nezisemthethweni ekubonelelwa ngazo iinkcukacha.
Ulwazi lomntu siqu luqokelelwe ngu BullyingCanada igcinwe ikhuselekile. Abasebenzi bethu bagunyaziswe ukuba bafikelele kulwazi lobuqu olusekwe kuphela kwimfuno yabo yokujongana nolwazi ngesizathu(i)sizathu sokuba lufunyenwe. Izikhuselo zikhona zokuqinisekisa ukuba ulwazi aluchazwanga okanye aluxelwanga ngokubanzi kunokuba luyimfuneko ukuze kuphunyezwe injongo ebekuqokelelwe kuyo. Sikwathatha amanyathelo okuqinisekisa ukuthembeka kolu lwazi lugciniwe kwaye siluthintele ukuba lungalahleki okanye lutshabalale.
Ulwazi lomntu siqu esiluqokelelayo lusetyenziselwa ukwenza intengiselwano eceliweyo okanye egunyaziswe ngumnikeli. Oku kunokubandakanya ukusebenzisa iinkcukacha zobuqu ukwenza umnikelo, ukuthumela iinkcukacha okanye izixhobo eziceliweyo, ukubhalisa omnye weminyhadala yethu, ukugcina abantu besazi malunga. BullyingCanada iziganeko kunye neendaba, cela inkxaso, kwaye wenze zonke izinto eziyimfuneko ukuphuhlisa nokugcina ubudlelwane bethu nabaxhasi.
Ngeminikelo yewaka leedola ($1,000) okanye ngaphezulu, BullyingCanada ipapasha amagama abaxhasi kwiwebhusayithi yayo, ngemvume yabanikeli. Bonke abanikeli abanezipho eziliwaka leedola ($1,000) okanye ngaphezulu abanganqweneli kupapashwa igama labo bayacelwa ukuba babonise ukhetho lwabo kwifomu yomnikelo okanye baqhagamshelane nathi ngomnxeba ku-(877) 352-4497, okanye nge-imeyile [imeyile ikhuselwe] okanye ngeposi: 471 Smythe St, PO Box 27009, Fredericton, NB, E3B 9M1.
BullyingCanada singabelana ngeenkcukacha zobuqu namaqela esithathu abandakanyekayo ukuze asincede ekuboneleleni ngeenkonzo ukuze senze enye okanye ngaphezulu kwezi njongo zichazwe ngasentla. Aba baboneleli ngenkonzo abavumelekanga ukuba basebenzise iinkcukacha zobuqu nangayiphi na injongo ngaphandle kokubonelela olu ncedo kwaye kufuneka bakhusele ulwazi lomntu olufumana kuthi okanye bafikelele kwaye bathobele imigaqo yobumfihlo jikelele echazwe kulo Mgaqo-nkqubo waBucala.
Sihlala sibonelela abantu esijongene nethuba lokukhetha ukungabelwa ngolwazi lwabo ngeenjongo ezingaphaya kwezo beziqokelelwe ngokuthe ngqo. Ukuba nangaliphi na ixesha, umntu angathanda ukuba ulwazi lwakhe luhlaziywe okanye lususwe kolunye loluhlu lwethu lokuposa, uyacelwa ukuba asithumelele i-imeyile apha. [imeyile ikhuselwe] okanye usitsalele umnxeba (877) 352-4497 kwaye siya kwenza uhlengahlengiso (s) kulwazi lomntu siqu kwiintsuku ezingama-30 (amashumi amathathu).
Ukuba umntu akaphumanga ekufumaneni ulwazi lwentengiso kwi-ofisi yethu yesizwe, sinokusebenzisa iinkcukacha zoqhagamshelwano ukunika ulwazi malunga BullyingCanada uphuhliso okanye imisebenzi, iziganeko ezizayo zokunyusa ingxowa-mali, okanye amathuba enkxaso.
Iwebhusayithi kunye norhwebo lwe-elektroniki
Xa undwendwela iwebhusayithi yethu ku BullyingCanada.ca singaqokelela iinkcukacha ezingachaziyo. Sinokuqokelela kwaye sisebenzise iidilesi ze-IP ukuhlalutya iindlela, ukulawula indawo, ukulandelela intshukumo yabaxhasi, kwaye siqokelele ulwazi olubanzi lwedemografi ukuze lusetyenziswe ngokubanzi. Asiqhagamshelani needilesi ze-IP kulwazi olunokuchonga umntu.
Sisebenzisa iipassword kunye nesoftware yoguqulelo oluntsonkothileyo ukukhusela ulwazi lomntu siqu kunye nolunye ulwazi esilufumanayo xa imveliso okanye inkonzo ebandakanya intengiselwano yorhwebo iceliwe kunye/okanye ihlawulelwa kwi-intanethi. Isoftware yethu ihlaziywa rhoqo ukuze kwandiswe ukhuseleko lolo lwazi.
Iwebhusayithi yethu iqulethe iilinki eziya kwezinye iiwebhusayithi. Nceda uqaphele ukuba BullyingCanada ayinaxanduva ngezenzo zabucala zezinye iiwebhusayithi ezinjalo. Sikhuthaza abaxhasi bethu ukuba baqaphele xa beshiya iwebhusayithi yethu kwaye bafunde umgaqo-nkqubo wabucala wewebhusayithi nganye eqokelela ulwazi olunokuchonga umntu.
Iikuki ziifayile ezibhaliweyo ezincinci ezinokusetyenziswa yiwebhusayithi ukubona abasebenzisi abaphindayo kunye nokwenza lula ukufikelela kunye nokusetyenziswa kwewebhusayithi. BullyingCanada ntoni hayi sebenzisa ulwazi olugqithiselwe ngeekuki ngazo naziphi na iinjongo zentengiso okanye ukuthengisa, kwaye olo lwazi alwabelwanga namaqela esithathu. Abasebenzisi kufuneka bazi ukuba BullyingCanada ayikwazi ukulawula ukusetyenziswa kweekuki ngabakhangisi okanye abantu besithathu.
Kwabo bangafuni ulwazi oluqokelelweyo ngokusetyenziswa kweekuki, uninzi lwezikhangeli zivumela abasebenzisi ukuba bakhanyele okanye bamkele iikuki. Nceda uqaphele ukuba iikuki zingafuneka ukubonelela ngeempawu ezithile ezikhoyo kule ndawo.
Sizikhusela njani iinkcukacha zakho
BullyingCanada ithatha amanyathelo afanelekileyo kwezorhwebo ukukhusela iinkcukacha zobuqu ekufikeleleni okungagunyaziswanga kunye nokugcina ukuchaneka nokusetyenziswa ngokufanelekileyo kolwazi ngeendlela ezifanelekileyo zomzimba, ezobuchule kunye nentlangano. Zonke iintengiselwano ze-intanethi kunye negalelo kwiwebhusayithi yethu zenzeka ngenkqubo ekhuselekileyo, yabucala, nekhuselekileyo ekhusela iinkcukacha zomntu ngamnye.
Bonke abasebenzi bethu, amavolontiya, kunye nababoneleli benkonzo kufuneka bathobele imiqathango yalo Mgaqo-nkqubo waBucala kwaye kufuneka bagcine ulwazi oluyimfihlo abafikelela kulo xa besenza imisebenzi yabo. Zonke iinkqubo zethu zikhuselwe ngomgangatho ophezulu womlilo kwaye bonke abasebenzisi bayafuneka ukuba basebenzise igama lokugqitha.
Ukugcinwa kunye nokulahlwa kolwazi lomntu
BullyingCanada igcina iinkcukacha zobuqu ixesha elide kangangoko kuyimfuneko ukuzalisekisa injongo ebiqokelelwe yona kunye nokuthobela imithetho esebenzayo.
Uhlaziyo loMgaqo-nkqubo waBucala
Sihlala sihlola iindlela zethu zabucala kwimisebenzi yethu eyahlukeneyo kwaye sihlaziya umgaqo-nkqubo wethu. Nceda ujonge iwebhusayithi yethu ethi www.bullyingcanada.ca rhoqo ngolwazi lweendlela zethu ezisexesheni.
Uphuma njani, ucele ufikelelo, okanye uhlaziye iinkcukacha zakho
BullyingCanada yenza iinzame zokurhweba ezifanelekileyo ukugcina iifayile ziphelele, zihlaziyiwe, kwaye zichanekile. Ukuba umntu unqwenela ukufikelela, ukuhlaziya okanye ukulungisa iinkcukacha zoqhagamshelwano zobuqu, acele ukususwa kuluhlu lwethu lokuposa, okanye uxoxe nathi ngenkxalabo yabucala, nceda uqhagamshelane neGosa lethu laBucala ngeposi kule nombolo: 471 Smythe St, PO Box 27009, Fredericton, NB, E3B 9M1 okanye ufowunele (877) 352-4497 okanye uthumele i-imeyile kuyo. [imeyile ikhuselwe]
Ulwazi oluthe vetshe malunga nobumfihlo kunye namalungelo akho malunga nolwazi lomntu lunokufumaneka kwiwebhusayithi yoMkomishinala waBucala waseCanada. www.priv.gc.ca/en/
Ulwazi kunye nesicelo sohlaziyo
Umbutho wethu uzibophelele ekukhuseleni ubumfihlo beenkcukacha zobuqu zabaxhasi bawo, amavolontiya, abasebenzi, amalungu, abathengi, kunye nabo bonke abanye abachaphazelekayo. Siyakuxabisa ukuthenjwa kwabo sisebenzisana nabo, kunye noluntu, kwaye siyaqonda ukuba ukugcina le ntembeko kufuna ukuba sibeselubala kwaye siphendule ngendlela esiluphatha ngayo ulwazi okhethe ukwabelana nathi ngalo.
Abantu banokujonga iinkcukacha zabo esinazo kwirekhodi ukuze baqinisekise, bahlaziye kwaye balungise, kunye nokuba naluphi na ulwazi oluphelelwe lixesha lususiwe.
Umxhasi ngokubanzi kunye nedilesi yomxhasi kunye nolwazi loqhagamshelwano lunokuhlaziywa ngokulula ngokubuyisela ikhadi eliqhelekileyo lomxhasi ngolwazi oluhlaziyiweyo okanye ngokufowunela. BullyingCanada umnxeba wasimahla (877) 352-4497 kwaye ucela utshintsho ngokubanzi kwifayile yomxhasi.
Utshintsho oluthile lomnikeli kunye nolwazi lwabathengi, kunye nezicelo zeekopi zeefayile zomntu ngamnye, kufuneka zenziwe ngokubhaliweyo kuthi:
Nceda uqaphele ukuba xa ezinye iifayile zobuqu zicelwa, kunokubakho ulwazi oluyimfihlo olunxulumene nabanye abantu okanye ulwazi oluyimfihlo BullyingCanada idityaniswe kuloo fayile. Ngokuthobela BullyingCanada Imigaqo-nkqubo yaBucala, ezi fayile azinakukotshwa okanye zikhutshwe; nangona kunjalo, naluphi na ulwazi oluyinyani malunga nomntu ocela ifayile yakhe luya kwenziwa ukuba lufumaneke.
Kwiimeko eziqhelekileyo, zonke izicelo kunye nohlaziyo luya kugqitywa kwiintsuku ezingama-30 zokufunyanwa kwesicelo.
Iinkxalabo kunye nezikhalazo
BullyingCanada uzibophelele ekuphatheni abaxhasi, amavolontiya, abasebenzi, amalungu, abathengi, kunye nabo bonke abanye abachaphazelekayo ngentlonipho nolwazelelelo. Nokuba yeyiphi na imigudu encomekayo, kuya kubakho amaxesha apho iimpazamo kunye nokungaqondani kunokwenzeka. Nokuba zithini na iimeko, ukusonjululwa kwengxaki ngendlela eyanelisa onke amaqela yeyona nto iphambili ixhalabisayo BullyingCanada. Ungaqhagamshelana nathi ngokubhala kule dilesi:
Nceda qiniseka ukuba ubandakanya oku kulandelayo kumyalezo okanye ileta yakho:
Idilesi kunye nenombolo yomnxeba apho ukhetha ukufumaneka khona;
Ubume besikhalazo; kwaye
Iinkcukacha eziphathelele kulo mba kwanokuba sele uwuxoxile nabani umcimbi lowo.
Kuya kwenziwa iinzame zokuphendula kwiinkxalabo kunye nezikhalazo ngexesha elifanelekileyo.
Ulwazi oluthe vetshe malunga nobumfihlo kunye namalungelo akho malunga nolwazi lwakho lobuqu lunokufumaneka kwiwebhusayithi yoMkomishinala waBucala waseCanada. www.priv.gc.ca/en/